Hab caafimaad laguma baari karo da'da kuwa danbi lagu soo oogo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maxkamada sare ee Iswiidhan. sawir: Sofia Tanaka / TT / TT
Hab caafimaad laguma baari karo da'da kuwa danbi lagu soo oogo
Qofka danbi gala oo la diidey in da'diisa lagu soo baaro hab caafimaad
La daabacay fredag 23 december 2016 kl 10.31
Maxkamadda sare ee dalkaan Iswiidhan ayaa maanta soo saartey go’aan dhaba tus ah oo ah in aan dadka danbiyada gala da’dooda lagu hubin karin baaritaan ama fiisito caafimaad ahaan loogu baaro laguna ogaado da’da dhabta ah ee uu qofkaasi jiro.
Go’aankaan ayaa ah mid aad iyo aad muhiim u ah, wuxuuna ahamiyad u leeyahay kiisas maxkamadeed oo badan maadaama da’du tahay mid raad aad u weyn ku leh kiiska iyo qofkaas maxkamadda la saarayo.
Danbiya badan oo sanooyinkii danbe la galey ayaa waxaa tooshka lagu ifiyey da’da ay jiraan dadkaas danbiyada dalkaan ku galey.Tusaale ahaan sanadkii hore ayaa waxaa maxkamad la soo taagey wiil soogalooti ah oo dalkaan markuu yimid isku dhiibey in uu 17 sano jiro balse markii danbi uu galey dartiis maxkamad la hor keeney ayuu sheegey in da’diisa dhabta ahi intaas ka yar tahay sidaas daraadeedna uusan gaarin da’dii qof lagu maxkamadeyn lahaa.
Maadaama wiilkaas maxkamadda la horkeeney uusan heysan waraaqo ama teesare caddeynaya da’da dhabta ah ee uu jiro , ayaa xeer ilaaliyihii wiilkaas danbiga ku soo oogayey wuxuu dalbadey in baaritaan caafimaad lagu xadado da’da dhabta ah ee uu wiilkaasi jiro, laakiin maxkamadda heer dagmo ah iyo maxkamadda sare ayaa labaduba waxay diideen taladaas uu xeer ilaaliyuhu soo jeediyey, maanta ayaa sidoo kale waxaa la diidey abiilkii uu xeer ilaaliyaha qaranku kiiska wiilkaas ka qaatey.
Maxkamadda sare ee dalkaan Iswiidhan ayaan heyn wax sharci ah oo ay u cuskato in ay go’aamiso in da’da dhabta ah ee qofku jiro hab baaritaan dhanka caafimaadka ah lagu soo saaro si loo ogaado in qofka danbigaas galey uu gaarey da’ qaangaarnimo oo lagu maxkamadeyn karo iyo in kale.
Sharciga dalkaan ayaa wuxuu ogolyahay in qofku markuu danbi galo qiimeyn lagu sameyn karo da’da qofkaasi jiro, balse aan taas la sameyn karin markii qofkaas maxkamad la hor keeno.